भुइँकटहर चिन्ह लिएर चुनाव लडेका जगन्नाथले दिए कांग्रेसजन खुसी पार्ने अभिव्यक्ति, कम्युनिस्टहरु हिस्सै! - Media Dabali
आइतवार, जेठ ८ २०७९
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर चुनाव लडेका जगन्नाथ पौडेलले कांग्रेस छाडेर कतै नजाने बताएका छन्। बागी उम्मेदवारी दिएका पौडेललाई कांग्रेसले कारबाही गरेको छ। तर, उनी भने कांग्रेस छाडेर कतै नजाने बताउँछन्।
‘हामी किन अरु पार्टीमा जाने? हामी मुल पार्टी हौं र मुलधारमा छौं, हामीलाई अन्य पार्टीमा जान आवश्यक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तपाईं हेर्दै जानुहोला हँसिया हथौडाको प्रचार गरेर हिंड्नुभएको छ, पछि आउने ठाउँ त यही हो नी। हँसिया हथौडालाई भोट हाल्ने साथीहरु विस्तारै हाम्रोमा आउँछन्।’
उनले आफूले पार्टीलाई बलियो बनाउन लागेकाले कसैसँग तिक्तता नरहेको दाबी गर्छन्। ‘म त पार्टीलाई सुदृढ, संगठित बनाउनुपर्छ, पार्टीमा निष्ठाको कदर हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रियस्तरमा संयोजनको रुपमा काम गर्नेछु। मेरो पार्टीसँग कुनै तिक्तता छैन। कुनै नराम्रो छैन, म समदूरीमा छु। मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। राजनीतिको लागि यो कदम चालेको हुँ। मलाई नजिक र टाढा हुनुपर्ने कारण छैन,’ उनी भन्छन्।
एमालेले भरतपुरको मेयरका लागि जितको आत्मविश्वास गुमाइसकेको उनको दाबी छ। ‘मैले त मेरै मत ल्याएको हो। घाटा–नाफा कसलाई भयो भन्‍ने कुरामा म जान चाहन्‍नँ। मलाई आउने मतको प्रकृति हेर्नुभयो भने चौतर्फी छ र संवेदनशील मत मलाई आएका छन्। मलाई मत दिनेहरु जागरुक, चेतनशील छन्, उनीहरुको निष्ठाको राजनीतिको लागि पुरस्कारका दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। पौडेलले अहिलेसम्म १२ हजार ८१० मत ल्याएका छन् ।